Hiran State - News: Shir lagu taageerayey m/weynaha mustaqbalka Somaliya oo xaley dhacay.
Shir lagu taageerayey m/weynaha mustaqbalka Somaliya oo xaley dhacay.
Jimco 11,Maarso 2011 (HSOL)-Taageero aan kala go laheyn ayuu helayaa maalinba maalinta ka danbeysa m/weynaha mustaqbalka Somaliya Prof Warfaa. shir ay so abaabuleen qeybaha kala duwan ee jaliyadaha reer Hiiraan ee qurbaha kaasi oo uu marti ku ahaa m/weynaha mustaqbalka Somaliya Prof Warfaa ayaa is wareysi iyo warbixino laga dhageystay musharaxa kedib waxaa si buuxda loo taageeray Prof Warfaa iyadoo shacabkii ka soo qeyb galay shirkaas dhinaca isgaarsiinta ahaa ay u sheegeen Prof Warfaa iney hiil iyo hooba la garab taagan yahiin.
Shirka oo dadkii ka soo qeyb galay ay ku kala noolaayeen 5ta qaaradood ee dunida ayaa waxuu u dhacay sidii la rabay. sida muuqata marka laga soo tago taageerada guud ee uu Prof Warfaa ka helayo shacabka Somaliyeed hadane mida reer Hiiraan ayaa iyaduan ah mid aan la dheyelsan karin. reer Hiiran ayaa hada u muuqda kuwo hadafkoodu yahay sidii ay u hanan lahayeen hogaanka ugu sareeya dalka oo cid walba oo Somali ah ay hore u soo qabatay qaarne ay walito u dhiman yahiin sidii ay hogaanka dalka u qaban lahayeen.
Warar lagu kalsoonaan karona waxey sheegayaan in maalinta berito ah uu m/weynaha mustaqbalka Somaliya Prof Warfaa Hotelka caalamigaa ee Hilton oo ku yaala magaalada Nairobi uu kula kulmi doono xildhibaanada intiiba ku sugan halkaas.
Education is the most powerful weapon which you can use to change the world".
La soco wararka musharaxa iyo sida maalinba maalinta ka danbeysa shacbaku u taageerayaan.
· admin on March 11 2011 11:52:48 · 0 Comments · 2111 Reads ·
14,637,706 unique visits